Gary Neville Oo Saadaaliyey Kulanka Liverpool vs Real Madrid - Kooxdee Ayuu Guul-darro Ugu Bushaareeyey - Laacib
HomeWararka Champions LeagueGary Neville Oo Saadaaliyey Kulanka Liverpool vs Real Madrid – Kooxdee Ayuu Guul-darro Ugu Bushaareeyey
Gary Neville Oo Saadaaliyey Kulanka Liverpool vs Real Madrid – Kooxdee Ayuu Guul-darro Ugu Bushaareeyey
Gary Neville ayaa rumaysan in Liverpool aanay gaadhi karin tirada goolasha laga doonayo in ay ugu soo gudubto wareegga semi-finalka Champions League marka ay Arbacada garoonkeeda Anfield ku qaabbisho Real Madrid oo ciyaartii hore kaga soo badisay 3-1.
Los Blancos ayaa ahayd kooxda fiican kulankii hore ee Alfredo Di Stefano oo saddexda gool ay u kala dhaliyeen Vinicius Junior oo laba gool saxeexay iyo Marco Asensio oo midka saddexaad ku daray.
Liverpool oo Sabtidii guul soo laabasho ah ka gaadhay Aston Villa, soona afjartay lix ciyaaarood oo Premier League ah oo lagaga badinayey garoonkeeda ayaa waxay rajaynaysaa in ay mar kale guul soo laabasho ah kusoo noolayso rajadooda Champions League.
Kooxdan ayaa laba sannadood ka hor waxay guul soo laabasho 4-0 ah ka gaadhay Barcelona oo lugtii hore ee Camp Nou kaga badisay 3-0, waana daliilka ay haystaan marka ay Real Madrid soo dhoweeyaan.
Laakiin Gary Neville ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay, in Liverpool aanay awoodi doonin in ay ka adkaato Real Madrid iyadoo la imanaysa guul 2-0 ah oo ay u baahan tahay in ay gaadho, si ay usoo gudbi karto.
“Liverpool aad ayay u liidatay kulankii usbuucii hore ee Madrid, shaqo badan ayaana u taalla, aniguna ma hubo in ay qaban doonaan sababtoo ah Anfield kumay fiicnayn.” Ayuu yidhi Gary Neville.
Waxa uu Gary Neville soo qaatay bandhiggii Liverpool ee ciyaartii Aston Villa ee ay waqtiga dambe guusha kaga gaadheen Sabtidii, waxaanu tilmaamay inay ka hadhayaan Champions League, isagoo yidhi: “Xataa kulankii Liverpool, waqti dambe ayay guusha heleen. Haddii ay taageereyaal joogi lahaayeen, sheekadu way ka geddisnaan lahayn, laakiin hadda waxay ila tahay in ay ka hadheen Champions League.”